स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा नेपालका मल्ल र न्युयोर्कका प्राध्यापक ओझा उत्कृष्ट - Durbin Nepal News
स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा नेपालका मल्ल र न्युयोर्कका प्राध्यापक ओझा उत्कृष्ट प्रथम हुनेले एक लाख र दोस्रो हुनेले ५० हजार पाउने
दूरबिन नेपाल ३० असार २०७७, मंगलवार ०४:२७
अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने प्राध्यापक अविन ओझाको लेखलाई नेपालको एक स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट दोस्रो घोषित गर्दै पुरस्कृत गरिने भएको छ । नेपालबाट सञ्चालित अनलाईन पोर्टल “विकास न्युज डटकम” ले आयोजना गरेको विकास न्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा सुवास मल्ल्लको लेख पहिलो र अविन ओझाको लेखलाई दोस्रो घोषणा गरिएको थियो भने धनप्रसाद पौडेलको लेख तेस्रो भएको थियो । पहिलो हुने लेखलाई एक लाख दोस्रोलाई पचास हजार र तेस्रोलाई २५ हजार पुरस्कार दिइने बताइएको छ । “विकास न्युज डटकम” ले आयोजना गरेको स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा डा. ओझाले कोरोना भाइरस र यसको सामाजिक असरकाबारे “पृथक तरिकाले उदाउंदै विश्व” शिर्षकमा स्तम्भ लेखेका थिए । त्यस्तै प्रथम घोषित सुवास मल्लले “अवसरहरुले ढकढकाउंदै हाम्रो ढोका” शिर्षकको लेख लेखेका थिए ।
स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा दोस्रो हुने डा. ओझा न्युयोर्कको सिटी युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्क (क्युनी)मा प्राध्यापन पेशामा संलग्न छन । उनी अमेरिकामा सञ्चालित दूरबिन नेपाल लगायत अन्य प्रत्रिकाहरु र नेपालबाटै प्रकाशित हुने राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा पनि आलेख र स्तम्भकारको रुपमा सक्रिय छन । लेखन प्रतियोगिताका अन्य विजेताहरु नेपालमै सक्रिय छन ।
लेखन प्रतियोगितामा निर्णायकको भुमिकामा बरिष्ठ चिकित्सक एवं मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, लेखक तथा साहित्यकार बासुदेव अधिकारी र प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले रहेका थिए । प्रतियोगितामा सम्पादकीय मुल्यांकनको आधारमा छनौट भएका लेखहरुलाईमात्र सहभागी गराईएको आयोजकले जनाएका छन । एकसय ११ लेखबाट छनौट गरि ९६ लेखलाई प्र्रतिष्पर्धामा सहभागी गराईएको थियो । उत्कृष्ट लेखको मापनका लागि लेखनको विषयवस्तु, अनलाईनमा भएका सेयर र प्रतिक्रियालाई आधार बनाइएको थियो । स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा अन्य विधाका उत्कृष्ट साहित्य तथा लेखनलाईपनि सहभागी गराई उत्कृष्टहरुको नाम सार्वजनिक गरिएकोे छ । विजेताहरुलाई अगष्ट १५ मा एक कार्यक्रम गरी नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिने विकास मिडियाले जनाएको छ ।
३० असार २०७७, मंगलवार ०४:२७ मा प्रकाशित